Nagu saabsan - Xuzhou QLT Trade Co., Ltd.
Dhalooyinka Khamriga Cas
Dhalo Liquor ah
Dhalo vodka ah
Dhalo caado ah
Dhalo midab leh
Muraayadaha Buluuga ah
Noocyada & Midabbada
Muunado Dhalo ah
MASTER GlasasMAKER: QAADASHADA, GUUD EE MAADDADA IYO HAL-ABUURKA
Soo saaraha dhalada dhalada ah
tiro aad u tiro badan oo khibrad iyo farsamo yaqaanno iyo shaqaale maamul leh. shirkaddu waxay ku faantaa inay ku takhasustay, caqli iyo shaqaale dhalinyaro ah waxaan wJterprising ruuxa shirkadda waa: 'Innovation, Exploration. Tartan. Kala-rogashada iyo wax-ka-qabashada ", tilmaamaha tayada ayaa ah: MAYA Wanaagsan. 15.11 Dhig tor. Qancitaanka Macaamiilka iyo Sii wadista Hormarinta '. Sidii loo ilaalin lahaa daba-galka. Ujeeddada dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya warshaddeennu waa in loo horumariyo shirkad qaabkeedu yahay 5g oo leh ganaax maareyn iyo qalab casri ah!
Warshadeenu waxay haysaa SOS. COO. kormeerka gudaha iyo karantiilida, iyo xuquuqda ka ganacsiga badeecada shisheeye. Ruuxa hal-abuurnimada, sahaminta, tartanka, halganka iyo horumarka waa siyaasad tayo leh "oo aan lagu dadaalin waxa ugu fiican, laguna dadaalo kaamil ahaanta, qancinta macaamiisha iyo heer sare,".
DHAQO DHAQAN KA DHEER IYO
KHIBRAD GAAR AH
Laga soo bilaabo hurdi daran, oo dhalaalaya midabka huruudda, gob dhalaalaya oo muraayad dhalaalaya ayaa si habsami leh u afuufaya oo loo qaabeyn karaa. Waxaan joognaa xuzhou of china, oo ku taal liuxin Village, oo loogu magac daray qarnigii 15aad "Glass Village" *. Halkan, in ka badan qarni, tuulo ayaa ku korodhay, ku noolayd kuna sii ballaartay adduunka iyada oo ay ugu wacan tahay khibradda gaarka ah ee muraayadaha sameeyaha mucjisada ah ee loo soo gudbiyay jiilalka.
Iyaga oo ay ku dheehan tahay xamaasad iyo jacayl shaygan gaarka ah, muraayadaha sameeyayaasha sharafta leh waxay awood u yeesheen inay bartaan oo ay u sii gudbiyaan aqoontooda jiilba jiilka, maaddaama horumarka tikniyoolajiyadda iyo hal-abuurnimadu sii ballaaranayaan.
Muraayaddu waa shay nool, oo aan had iyo jeer lagu guuleysan soo-saarka walxaha isku midka ah. Qaabeynta ayaa walxahaan xasilloonida ka dhigeysa cadaadis aad u weyn, taas oo sababi karta khaladaad marmar ah inta lagu jiro howlaha wax soo saarka. Hadana, waa isla sixirkan, dabka iyo dabeecada dabeecada leh in dadka QLTGLASS ay si fiican u barteen mahadnaqooda aqoontooda gaarka ah.
Waa shaqo kulul qabashada muraayad la shubay. Waxaa hayey wasakhahaasi, muraayadaha sameeyayaashu waxay si taxaddar leh u ilaalinayaan gob dhalaalaya waxayna kormeerayaan inta lagu jiro geedi socodka wax soo saarka si loogu beddelo hal dhalo oo keliya. Waa geedi socod soo jiidasho leh, oo ay fuliyaan farsamayaqaanno muraayadaha ah oo si xirfad leh isugu daraya saxnaanta iyo wanaagga si loo damaanad qaado dhalooyin isku mid ah oo ka xor ah cilladaha kasta. Xakamaynta tayada adag ayaa soo socota, caddaynta wax soo saarka caadiga ah, tayada la damaanad qaaday iyo qanacsanaanta macaamiisha
Shabakadan iyo khibrada sameynta muraayadaha-dhaqameedka, oo dunida oo dhan ku gaar ah, ayaa awood u siineysa inay bixiso magacyada ugu waaweyn ee barafuunnada, qurxinta iyo ruuxa khibrad caalami ah oo laga helo dhaqanka iyo hufnaanta iyo raaxada "lagu sameeyay Shiinaha".